Ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta yiri ka ha nwere echiche megidere IRB. N'otu aka, ha na-ele ya anya dị ka ọrụ na-adịghị mma. N'agbanyeghị nke ahụ, n'otu oge ahụ, ha na-echekwa na ọ bụ onye ikpebi ikpeazụ nke mkpebi ikpe. Nke ahụ bụ, ọtụtụ ndị nchọpụta yiri ka hà kwenyere na ọ bụrụ na IRB kwadoro ya, mgbe ahụ ọ ghaghị ịdị mma. Ọ bụrụ na anyị kwenye na ike nke IRBs dịka ha dị ugbu a-na e nwere ọtụtụ n'ime ha (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) - mgbe ahụ ka anyị dị ka ndị na-eme nchọpụta aghaghị ibu ọrụ ọzọ maka ụkpụrụ omume nke nyocha anyị. IRB bụ ala na-adịghị ụlọ, echiche a nwere isi ihe abụọ.
Akpa, IRB bụ ala ọ pụtara na ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ na-achọ nyocha IRB, mgbe ahụ, ị ​​ga-agbaso iwu ndị ahụ. Nke a nwere ike iyi ihe doro anya, ma achọpụtara m na ụfọdụ ndị yiri ka ha chọrọ izere IRB. N'ezie, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na mpaghara ndị na-enweghị nsogbu, IRB nwere ike ịbụ ezigbo ndị enyi. Ọ bụrụ na ị na-agbaso iwu ha, ha kwesịrị iguzo n'azụ gị ma ọ bụrụ na ihe na-adabaghị na nyocha gị (King and Sands 2015) . Ma ọ bụrụ na ị gaghị agbaso iwu ha, ị nwere ike ịkwụsị onwe gị n'ọnọdụ siri ike.
Nke abụọ, IRB abụghị ụlọ dị elu na-egosi na nanị ijupụta ụdị gị na ịgbaso iwu ndị ezughị oke. N'ọtụtụ ọnọdụ, dịka onye na-eme nchọpụta bụ onye maara ihe gbasara ụzọ isi eme omume. N'ikpeazụ, ị bụ onye nchọpụta ahụ, ọrụ ọrụ gbasara gị bụ gị; ọ bụ aha gị na akwụkwọ.
Otu ụzọ iji hụ na ị na-emeso IRB dịka ala ma ọ bụghị ụlọ ka ị gụnye ihe mgbakwunye ụkpụrụ omume na akwụkwọ gị. N'ezie, ị nwere ike ide ihe odide gị dị mma tupu ọmụmụ ihe gị amalite, iji mee ka onwe gị chee echiche banyere otu ị ga-esi akọwa ọrụ gị nye ndị ọgbọ gị na ọha na eze. Ọ bụrụ na ịchọta onwe gị mgbe ị na-ede ihe odide gbasara omume gị, mgbe ahụ, ọmụmụ ihe gị enweghi ike ịdaba n'usoro iwu ziri ezi. Na mgbakwunye na inyere gị aka ịchọpụta ọrụ nke gị, idepụta ngwa ngwa gị ga-enyere ndị na-eme nnyocha aka ikwurịta okwu ọma na ịkwado ụkpụrụ kwesịrị ekwesị dabere na ihe atụ site na nyocha ọhụụ. tebụl 6.3 na-enye akwụkwọ nyocha akwụkwọ ike nke m chere na enwere mkparịta ụka dị mma banyere ụkpụrụ omume nyocha. Ekwenyeghị m na ihe ndị ọkachamara na-ekwu na nkwurịta okwu ndị a, ma ha bụ ihe atụ niile nke ndị nchọpụta na-eme ihe n'eziokwu dị ka Carter (1996) kọwara: na nke ọ bụla, (1) ndị nchọpụta na-ekpebi ihe ha chere na ọ ziri ezi na ihe dị njọ; (2) ha na-eme ihe dabere na ihe ha kpebiri, ọbụna na ego nke onwe ha; na (3) ha na-egosi n'ihu ọha na ha na-eme ihe na-adabere na nyocha ha nke ọma banyere ọnọdụ ahụ.
Isiokwu nke 6.3: Akwụkwọ ndị nwere mkparịta ụka na-akpali mmasị banyere ụkpụrụ omume nke nnyocha ha
E debara okwu ahụ
Rijt et al. (2014) Nyocha ugbo n'enweghi nkwenye
Izere nsogbu dị n'ime ihe
Paluck and Green (2009) Nyocha nke ubi na mba ndị na-emepe emepe
Nnyocha na okwu dị nro
Mmekọrịta nkwenye mgbagwoju anya
Nweghachi nke nsogbu ndị nwere ike ime
Burnett and Feamster (2015) Nnyocha n'enweghị nkwenye
Idozi ihe ize ndụ na uru mgbe nsogbu dị ike ịkọ
Chaabane et al. (2014) Ihe nyocha nke ndi mmadu bu ihe ndi ozo
Iji faịlụ data agbanye
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Nyocha ugbo n'enweghi nkwenye
Soeller et al. (2016) Usoro mmegide nke ọrụ